မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | | စက်
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လောကသည်စတိုင်နှင့်အရွယ်အစားအရသာမကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည် Moto 125။ ယနေ့လုံခြုံရေးသည် ပို၍ အရေးကြီးသောစဉ်းစားသုံးသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် နည်းပညာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရင့်ကျက်ခဲ့သည်။ သင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများအကြောင်းပိုမိုသိလိုပါသလား? ဆက်ဖတ်ပါ
5 Anti-kickback ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ clutch
6 KTRC ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲထိန်းချုပ်မှု
7 Hill ကအကူအညီစတင်
8 LED နည်းပညာ
ပါဝင်သည် ဆိုင်ကယ်လောကသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသည်နည်းပညာ၏ကမ္ဘာကြီးကိုဖော်ပြရန်မ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒေသနှစ်ခု၏တဖြည်းဖြည်းပေါင်းစည်းမှုကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ငါတို့မှာaအကြီးဆုံးသော GPS စနစ်များ သင်ကအပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုငျသောအလွန်လွယ်ကူသော -to- အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက်။
ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ intercoms တွေလည်းရှိပါတယ် သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းနှင့်၎င်း၏စမတ်လက်ထောက်နှင့်အတူပေါင်းစည်း (Siri (သို့) Google Assistant)၊ သင့်ဆိုင်ကယ်၏ telemetry ကိုသတိပေးသောခရီးသွား application များစွာ။ နည်းပညာကဘဝကိုရိုးရှင်းစေပြီးခရီးသွားရတာပိုပျော်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။
အင်ဂျင်မျိုးဆက်သစ်များ၏စွမ်းအားတိုးလာခြင်းကြောင့်အင်ဂျင်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်၎င်းကိုကားမောင်းနေစဉ်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောအခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့်လမ်းအရည်အသွေး၊ အပူချိန်နှင့်ရာသီဥတုတို့သည်အသုံးဝင်သောချုပ်ကိုင်မှုကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည်။ Kawasaki သည်ရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည် ထိန်းချုပ်မှု Modes သာသုံးနိုင်သည်.
အားကစားနည်းသောစက်ဘီးများသည်အကန့်အသတ်နှင့်သာနိမ့်သည် အများဆုံးစွမ်းအင်၏ ၇၀% နှင့်ပိုမိုတိုးတက်သောပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အားကစားစက်ဘီးသုံးမျိုးမှာအကြွင်းမဲ့၊ အလတ်စားနှင့်အနိမ့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စက်ဘီး၏ပုံသဏ္changeာန်ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စကော့လူမျိုးဂျွန်ဘွိုက်ဒွန်းлопသည် ၁၈၈၈ တွင်သူတို့ကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သဖြင့်များစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၃၀ အတွင်းအမျိုးမျိုးသောမော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်တာယာအမျိုးအစားများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထကြပြီ TPMS နဲ့တူတီထွင်မှု (တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်) ယာဉ်မောင်းများအားသူတို့၏တာယာဖိအားမမှန်ပါကသတိပေးရန်။
အကယ်၍ တာယာအလွန်ဘရိတ်ခြင်းကြောင့်လှည့်ပါက antilock ဘရိတ်ယန္တရားသည်စတင်သည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်သည်ဘီးမြန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာများကျဆင်းခြင်းကိုတွေ့ရှိသောအခါ၊ ဘရိတ်ဖိအားကိုလျော့နည်းစေသည်။ အရေးပေါ်ဘရိတ်စတင်သောအခါဘရိတ်လီဗာသို့မဟုတ်နင်းအနည်းငယ်တုန်နေသည်။ KIBS နှင့်အတူ အသိဉာဏ် anti-lock ဘရိတ်စနစ် Kawasaki အားကစားမော်ဒယ်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီးအမှတ်တံဆိပ်သည်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဆိုင်ကယ်ကကောက်ယူနေတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်ပြီးသင်ပိုပြီးတိတိကျကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဆိုင်ကယ်ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်ကို ABS ထိန်းချုပ်ရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
Anti-kickback ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ clutch
အောက်သို့ဆင်းသည့်အခါဘီးကိုပိတ်ထားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်ထိခိုက်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်တိုက်မိခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်း။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လုပ်ငန်း၏အခြားနည်းပညာတိုးတက်မှုများကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုသကဲ့သို့၎င်းသည်အထူးသီးသန့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအတွက်အဖြေတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။
Traction control သည်ပြီးခဲ့သည့်မျိုးဆက်သစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏အထင်ရှားဆုံးအီလက်ထရောနစ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုသင်သည် MotoGP မြင်းစီးသူရဲများအသုံးပြုသောနည်းပညာနှင့်အတူအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ Kawasaki သည် KTRC ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပါဝါအဆင့်သုံးဆင့် ရှိ၍ အားကောင်းသောဆုပ်ကိုင်မှုနှင့်အနိမ့်ဆုံးဆုပ်ကိုင်မှုနှင့်အမြင့်ဆုံးကာကွယ်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Z1000SX၊ Versys 1000, GTR1400 နှင့် Supersport ညှပ်များအတွက်၎င်း traction control ကို S-KTRC Sport Edition တွင်ရရှိနိုင်သည်။ settings သုံးခုရှိတယ် နောက်တာယာစလစ်ကိုခန့်မှန်းရန် DELTA နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်.
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, နှစ်ခု-Wheeler စက်မှုလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စတင်ခဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုအမွေဆက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာတောင်ကုန်းပေါ်အကူအညီဖြစ်သည်။ ဟုတ်လား၊
ရှေ့မီးများသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအားတက်ကြွစွာအကာအကွယ်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်မတော်တဆမှုကိုကာကွယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် incandescent သို့မဟုတ် halogen lamp များမှ LED နည်းပညာသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည် ပိုမိုကျယ်ပြန်သောမြင်ကွင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်အချို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွင်မိမိကိုယ်ကိုချိန်ညှိထားသောထောင့်မီးများရှိသည်။ နောင်အနာဂတ်တွင်လေဆာရောင်ခြည်ကိုနှစ်ဆဖြစ်စေပြီးကြာရှည်သောအလင်းသည်သာမန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မော်တာကမ္ဘာမှာကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသည့်အလောင်းအစားများကိုပြုလုပ်မည်ဆိုပါကအနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်အရာအံ့သြသွားမည်နည်း။ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စက် » ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ